မီဆို စွပ်ပြုတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တိုဖူး၊ဝါကာမီနှင့် ကြက်သွန်မြိတ် ခတ်ထားသော မီဆို စွပ်ပြုတ်
မီဆို စွပ်ပြုတ် (味噌汁, မီဆိုရှီရူ?)သည် ရိုးရာဂျပန် ချက်ပြုတ်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စွပ်ပြုတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး "ဒါရှီ"ဟုခေါ်သော ဟင်းရည်တစ်မျိုးထဲသို့ မီဆိုအနှစ်ထည့်မွေထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အကြိုက်ကိုလိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရာသီဒေသကိုလိုက်၍သော်လည်းကောင်း အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထည့်လေ့ရှိသည်။
၁ မီဆို အနှစ်
၃ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းများ
၅ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မီဆို
မီဆို စွပ်ပြုတ် တစ်ခု၏ ဝိသေသနှင့် အရသာသည် မီဆိုအနှစ် ရွေးချယ်မှုအပေါ်တွင် အကြီးအကျယ်မူတည်ပါသည်။ မီဆိုအနှစ်(ဂျပန်လို ခိုးဂျိကင်(麹菌?)ဟုခေါ်သော Aspergillus oryzae မှိုနှင့် ဆား၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆန်၊ ဘာလီ သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသုံး၍ ပဲပိစပ်ကို အချဉ်ဖောက်ထားသော ဂျပန်ရိုးရာ ဟင်းခတ်အနှစ်တစ်မျိုး) ကို အနှစ်နီ(အကာမီဆို)၊ အနှစ်ဖြူ(ရှီရိုမီဆို)နှင့် အရောအနှစ်(အဝါဆီ)ဟူ၍ အမျိုးအစားခွဲနိုင်သည်။ ရှင်ရှူမီဆို၊ဆန်ဒိုင်မီဆို စသဖြင့် ဒေသကိုလိုက်၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်လည်းရှိ၏။
အနှစ်နီ မီဆိုကဲ့သို့ အချိန်အကြာကြီး အချဉ်ဖောက်ထားသော မီဆိုအနှစ်မျိုးသည် မီဆို စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်ကို ပိုမိုပြင်းပြနက်ရှိူင်းသော အရသာမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အနှစ်ဖြူ မီဆိုကဲ့သို့ အချိန်ခဏလေးသာ အချဉ်ဖောက်ထားသော မီဆိုအနှစ်သည် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိုမြသော မီဆိုစွပ်ပြုတ်အရသာဖြစ်စေသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ မီဆိုထုတ်လုပ်မှု၏ ၈၀%သည် မီဆို စွပ်ပြုတ်များပြုလုပ်ရာတွင် သုံးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှ ၇၅%သည် တစ်နေ့လျင် အနည်းဆုံး မီဆို စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်သောက်ကြသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒါရှီ
မီဆိုစွပ်ပြုတ်ပြုလုပ်ရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသော ဒါရှီဟင်းရည်မှာ နီဘိုရှီခေါ် ဆာဒင်းငါးအခြောက်ကလေးများ၊ ကတ်ဆူအိုဘူရှီခေါ် ကြတ်တိုက်ထားသော တူနာငါးလေးများ သို့မဟုတ် ဟိုရှီ-ရှီတာကီ ခေါ် ရှီတာကီမှိုခြောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဟင်းရည်ဖြစ်သည်။ ရေညှိနှင့် ရှီတာကီ ဒါရှီဟင်းရည်မှာ သတ်သတ်လွတ်သမားများအတွက် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဟင်းချက်ရာတွင် အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ အရောင်၊အနံ့၊အရသာကို ရာသီကိုလိုက်၍ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အတွက် အခြားအနံ့၊အရသာတို့နှင့် အလွယ်တကူရောစပ်နိုင်သော ကြက်သွန်နီ နှင့် တိုဖူးတို့မှာ မပါမဖြစ် အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဟင်းရည်တွင် ပေါလောပေါ်နေနိုင်သော ဝါကာမီကဲ့သို့ ပစ္စည်းများနှင့် ဟင်းရည်တွင်မြုပ်သော အာလူးကဲ့သို့ ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ အခြားပါဝင်နိုင်သောပစ္စည်းများမှာ မှိုအမျိုးမျိုး၊ အာလူး၊ ရေညှိ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပုစွန်၊ ငါး၊ ခုံး၊ မုန်လာဥဖြူတို့ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဟင်းခတ်ပစ္စည်း အားလုံးနီးပါးလောက်ကို မီဆိုရှီရူတွင်ထည့်သည်။
အကယ်၍ ဝက်သားကို မီဆို စွပ်ပြုတ်တွင်ထည့်ပါက တန်ဂျီရူဟု ခေါ်ပြီး"ဝက်သား စွပ်ပြုတ်"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
စွပ်ပြုတ်ဟန်အမျိုးအစားနှင့် စားဖိုမှူးပေါ်မူတည်၍ ပြင်ဆင်တည်ခင်းပုံအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဂျပန်ချက်ပြုတ်နည်းတွင် အသီးအရွက်အများအပြားကို အသားနှင့် အရည်စပ်စပ်ရောလေ့ရှိရာ အထူးသဖြင့် မှိုအမျိုးမျိုး၊ မုန်လာဥဖြူ၊ မုန်လာဥနီ၊ အာလူး၊ တိုဖူးနှင့် ငါးတို့ဖြစ်သည်။ အသီးအရွက်နှင့်အသားများကို အရင်ချက်၍ အအေးခံပြီးမှ မီဆိုအနှစ်ကိုထည့်သည်။
ဂျပန်တွင် ရိုးရာမနက်စာသည် ထမင်းဖြူနှင့် မီဆို စွပ်ပြုတ်ဖြစ်သည်။ မီဆိုစွပ်ပြုတ်ကို လူတန်းစားမရွေးနှစ်ချိုက် သောက်သုံးကြသည်မှာ ရာစုနှစ်နှင့်ချီပြီဖြစ်သည်။ စွပ်ပြုတ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အဖုံးပါသော ယွန်းပန်းကန်လုံးဖြင့် တည်ခင်းလေ့ရှိပြီး ပန်းကန်လုံးလိုက် မ ကာ မော့သောက်လေ့ရှိသည်။ အဖတ်များကိုတော့ တူဖြင့်စားကြသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဂျပန် နိုင်ငံတော် ကင်ဆာဌာနမှ သုတေသနပညာရှင်များက တစ်နေ့လျင် မီဆို သုံးခွက်နှင့်အထက် သောက်သုံးခြင်းသည် အမျိုးသမီးများကို ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု အကြံပြုခဲ့ကြသည်။
↑ Shurtleff၊ William; Aoyagi၊ Akiko (2001)။ The Book of Tofu & Miso။ Speed Press။ ISBN 1580083587။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီဆို_စွပ်ပြုတ်&oldid=726591" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။